पार्टीहरु किन जुट्छन्?, किन फुट्छन् ? ?::News from Nepal
अहिले पार्टी मिल्ने र फुट्ने लहर नै चलेको छ। पार्टी मिल्दा ठूलो खुशीयाली छाउने गरेको छ तर त्यो सदाका लागि नहुने र एकताको शुरूवाती प्रक्रियामा नै विवाद आउने गरेको उदाहरण प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। पछिल्लो समयमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकता भएको छ।
हिजोका दिनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच भएको एकता पनि कसैको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। दशैँ मनाइरहेको बेला गरिएको एकता गर्ने प्रतिबद्धता किन त्यसरी अचानक आयो र केही दिन किन पर्खन सकेनन् ?
के दशैँ सकिएपछि गर्दा एकता प्रक्रिया अघि बढ्दैनथ्यो र रु यो प्रश्न सधैँ ताजा छ। आफैं मिलेका हुन् कि कसैको आदेश मानेका हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। पार्टी एकता हुँदा न त कुनै पार्टीको बैठक नै बस्नुपर्यो, न त छलफल नै चलाउनुपर्यो, जे–जस्तो भए पनि नयाँ पार्टी बन्यो, निर्वाचनमा भाग लिए र जनताले बढी विश्वास दिएर सरकार बनायो, योभन्दा अरू ठूलो खुशी उनीहरूको पार्टीलाई र नेता–कार्यकर्तालाई अरू केही हुन सक्दैन।
हिजोसम्म ओली र दाहाल सँगै जम्काभेट भए कुनै ठूलो घटना पो घट्ला कि जस्तो लाग्ने वातावरण थियो, के क्षणभरमै त्यो सम्बन्ध सुध्रियो र दुवैको बुद्धिबंगारो पलायो त रु २०६४ सालमा माओवादीले ‘अरूलाई हेरियो पटक–पटक, हामीलाई हेरौं एकपटक’ यो नारालाई मानेर नै जनताले बुझेर वा नबुझेर भोट हाले तर पछि भने जनताको त्यो मतको कदर गर्न सकेन उसले।
नेपाली कांग्रेस मिलेको पनि १३ वर्ष भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० को सभापति भएका शेरबहादुर देउवाले कांग्रेससँग पार्टी मिलाइदिए। उनको प्रजातान्त्रिक गुट अझै पनि जीवित छ। एकता भएको हस्ताक्ष्।र छँदै छ तर भावनाको भने खाँचो छ।
अलिकति फरक विचार लिएर हिँड्दैमा वैकल्पिक हुने भए सबैले त्यसै भन्थे। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले अहिले आफूलाई त्यही शक्तिको रूपमा प्रचार गरेको छ। तर २०७० सालको निर्वाचनमा राप्रपा नामको अर्कै पार्टीले संविधानसभामा ३ सिटमात्र जितेको थियो।
समानुपातिक जोड्दा र पछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा ९नेपाल० र पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाबीच एकीकरण भएर राप्रपा बन्दा ठूलै शक्तिशाली पार्टी बन्यो, पछि त्यो पनि टुटफुटकै नशाले कमजोरमात्र होइन अस्तित्वकै संकटमा पुग्यो। सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गरेर उपप्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्न थापाले लिएको चलख्याइँ पनि चानचुने थिएन। कसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन खोज्यो भने राप्रपाले समर्थन दिइहाल्थ्यो र उपप्रधानमन्त्रीसहित अरू महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिन्थ्यो।
उता राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० को पनि कथा बेग्लै छ। सानो स्वार्थमा पनि फुटिहाल्ने उनीहरूको स्वभाव पनि विचित्रकै छ। सरकारमा गएर मन्त्री खान पाइन्छ भनेपछि दुईजना सांसद भए पनि विभाजन भइहाल्ने पुरानै रोग हो।
यो लेख नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।